Badweynta Arctic glacial: sifooyinka, cimilada, noolaha iyo hanjabaadaha | Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 22/09/2021 09:11 | Ciencia
El barafka Arctic Ocean Waa midda laga helo dhinaca waqooyi ee meeraheena. Waxaan u tixgeliyey badweynta ugu qabow tan iyo inta badan biyaheeda waxaa daboolay baraf aad u weyn. Iyada oo isbeddelka cimiladu tani is -beddelayso. Go'yada barafku aad bay u dhalaalayaan, taas oo ka dhigaysa dhammaan qaababka nolosha ee ku habboon xaaladan adag ee aan noolaan karin.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato badda barafka ee Arctic, astaamaha iyo xayawaanka.
2 Samaynta iyo cimilada badda barafka ee Arctic
3 Flora iyo fauna ee badweynta barafka ee Arctic
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya tan iyo Badweynta Antarctic ayaa ah inay leedahay khaanad qaarad ah oo barafka laga helo. Maadaama barafku uu sii dhalaaliyo heerkan, Antarctica waxay sababi doontaa in heerka baddu kor u kacdo. Badweynta barafka ee Arctic ma laha shelf qaaradeed, kaliya biyo baraf ah. Tani waxay sababtay in burburka barafoobay uu dul sabeeyo biyaha dhexe. Barafyadan waaweyn ee barafku waxay ku hareeraysan yihiin badweynta oo dhan xagaaga iyo jiilaalka, oo marka biyuhu barafoobaan, waxay kordhisaa dhumucda.
Waxay ku taal cirifka waqooyi ee ugu dhow Arctic Circle. Waxay ku xaddidan tahay aagagga u dhow Aasiya, Yurub, iyo Waqooyiga Ameerika. Waxay ka gudubtaa Badweynta Atlantikada iyada oo sii marta Marinka Fram iyo Badda Barents. Waxay kaloo xuduud la leedahay Badweynta Baasifigga iyada oo u sii mareysa Bering Strait iyo dhammaan xeebta xeebta Alaska, Canada, waqooyiga Yurub, iyo Ruushka.
Moolkeeda ugu weyni waa inta u dhexeysa 2000 iyo 4000 mitir. Waxay leedahay baaxad guud oo qiyaastii ah 14.056.000 kiiloomitir oo laba jibbaaran.
Samaynta iyo cimilada badda barafka ee Arctic
In kasta oo samaynta baddan aan si fiican loo fahmin, haddana waxaa la rumeysan yahay in la sameeyay waqti hore. Xaaladaha deegaanka ee aadka u daran ayaa barashada baddan ka dhiga mid adag. Eskimos waxay halkan ku noolaayeen ilaa 20.000 oo sano. Dadkani waxay yaqaaniin sida loola qabsado xaaladaha cimilada aadka u daran ee meelahan. Waxay u gudbiyeen aqoonta lagama maarmaanka u ah jiilba jiil si ay u awoodaan inay la qabsadaan nolosha meelahan.
Fossils -ka laga helay baddan ayaa muujinaya caddayn ku saabsan nolosha dabiiciga ah ee sida joogtada ah u barafoobay. Waxaa lagu qiyaasay in qiyaastii 70 milyan oo sano ka hor, xaaladihiisu ay la mid ahaayeen tan Mediterranean -ka maanta. Waxay ahayd waqtiyo iyo waqtiyo juqraafiyeedyo gaar ah oo baddan la helay gabi ahaanba iyada oo aan baraf lahayn.
Heerkulka celceliska baddan jiilaalka wuxuu hoos ugu dhacaa -50 digrii, taasoo adkaynaysa in meeshan lagu noolaado. Cimilada dabayshu waa mid ka mid ah kuwa ugu qabow dhulka, taas oo u tarjumaysa in ka badan ama ka yar heerkulka sanadlaha ah ee aadka u hooseeya. Waxay badanaa u qaybsantaa laba xilli, xilli kasta wuxuu qiyaastii yahay 6 bilood. Waxaan falanqeyn doonnaa labada saldhig ee ku yaal Badweynta Arctic:
Xagaaga: Bilaha xagaaga, heerkulku wuxuu isku bedbeddelayaa ilaa 0 darajo, waxaana jira qorraxda oo joogto ah oo ka imanaysa qorraxda 24 saac maalintii. Waxaa sidoo kale jira baraf baraf joogto ah oo ka hortagaya in barafku si buuxda u dhalaalayo. Bilowga xagaaga, waxaa jiri doona duufaanno daciif ah oo leh roob ama baraf.
Jiilaal: Heerkulku wuxuu gaaraa -50 digrii, waxaana jira habeen daa’im ah. Xilligan oo kale, qorraxdu marna ma muuqato. Cirku waa cad yahay jawiguna waa deggan yahay. Tani waa sababta oo ah ma jirto wax saamayn ah oo ka imanaya iftiinka qorraxda.
Waa inaynaan iloobin in sababta ugu weyn ee jiritaanka ifafaalaha saadaasha hawada ay tahay saamaynta iftiinka qorraxda. Sidaa darteed, xilliga jiilaalka, xaaladaha cimiladu aad bay u deggan yihiin. Saamaynta isbeddelka cimilada iyo kulaylka caalamiga ah awgood, heerkulka bilaha xagaaga ayaa aad iyo aad u sii kordhaya, taas oo sababtay in gabi ahaanba dhammaato Badweynta Arctic.
Flora iyo fauna ee badweynta barafka ee Arctic
Inkasta oo baddan ay ku jirto xaalado aad u daran, haddana waxaa jira naasley badan oo ku habboon deegaanadan. Badankoodu waxay leeyihiin dhogor cad, taas oo isqarin karta oo qabowga iska celin karta. Waxaa jira ilaa 400 nooc oo xayawaan ah oo la qabsaday qabowga daran ee aagga. Kuwa ugu caansan waa kuwan waxaan leenahay 6 nooc oo ah shaabadaha iyo libaaxyada badda, noocyada kala duwan ee nibiriyada iyo orsada dabaysha, kuwa ugu caansan.
Waxa kale oo jira mollusks yaryar oo loo yaqaan krills, kuwaas oo kaalin muhiim ah ka leh Ahraamta noolaha badda. Dhirtu aad bay u yar tahay, oo aan lahayn dhogor ama liin. Barafka ka samaysmay Badweynta Arctic waa meel aad u barafaysan. Dusha meydadka aan biyaha ahayn ayaa labanlaabma jiilaalka waxaana xagaaga ku hareereysan biyo baraf ah. Koofiyadahaasi badanaa waa 2 ilaa 3 mitir qaro weyn iyo si joogto ah ugu dhex socda biyaha iyo dabaysha Siberia. Ugu dambayntii waxaan arki karnaa in qaar ka mid ah barafka barafka ah ay isku dhacaan oo gebi ahaanba isku milmaan. Tani waxay abuureysaa tiir qoraxday oo dhumucdiisu ka badan tahay saddex laab dhumucda daboolkii markii hore la sameeyay.
Waxaa la dhihi karaa milixnimada baddan waa tan ugu hooseysa meeraha. Tani waa sababta oo ah xaddiga uumi -baxa aad buu u hooseeyaa oo biyaha macaan ee dhalaalay ayaa saameeya xaddiga uumiga.
Waxaa lagu qiyaasaa in 25% kaydka adduunka ee saliidda, gaaska dabiiciga ah, daasadda, manganese, dahabka, nikkel, lead iyo platinum ay ku jiraan baddan. Taas macnaheedu waa dhalaalintu waxay u adeegsan kartaa ilahaas tamar ahaan iyo aag xeeladeed oo muhiim u ah mustaqbalka. Baddan ayaa ah kaydka dabiiciga ah ee ugu weyn biyaha macaan ee adduunka. Dhalaalihiisa ayaa sababaya geeridiisa dhow.
Barafka Arctic wuxuu u dhaqmaa sidii qaboojiye caalami ah, oo ka tarjumaya kulaylka qorraxda oo dib ugu soo noqonaya meel bannaan oo dhulkana qabow ka dhigaya. In kasta oo waxa ka dhaca Arctic ay saamayn doonto meeraha oo dhan, booskani waa mid ka mid ah kuwa ugu yar ee la ilaaliyo oo u nugul khataraha badan.
30-kii sano ee la soo dhaafay, afar meelood saddex meelood oo barafka dul sabaynaysa Arctic ayaa la waayay. Burburka barafka ayaa ka dhigay badda barafka ee Arctic meel ku habboon marin-habaabinta waxayna u soo bandhigtay kalluumeysi ballaaran iyo ka faa'iideysiga saliidda, gaaska dabiiciga ah iyo macdanta. Xaaladahaasi waxay soo saareen khilaafyo kala duwan oo dano gaar ah leh, qaarkood xitaa isku dhacyo milatari oo aad u daran.
Ka sokow isbeddelada maxalliga ah ee sida tooska ah u saamayn doona noolaha Arctic iyo hab-nololeedka, waxaa kale oo jiri doona isbeddello 'aad u fog' oo saamayn doona qaybaha kala duwan ee dhulka, sida Spain, halkaas oo deegaankeenna dabiiciga ah ay saamayn doonto kororka heerkulka .
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto badweynta barafka ee Arctic iyo sifooyinkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Glacial Arctic Ocean
Waa maxay weel